नेपाल आज | चुनाव हारेको मान्छे सांसद बन्न खोज्नु लाजमर्दो ( भिडियोसहित)
चुनाव हारेको मान्छे सांसद बन्न खोज्नु लाजमर्दो ( भिडियोसहित)
निकै सरल र मिलनसार नेताका रुपमा परिचित नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम पूर्व मन्त्री गणेस साह आफनै पार्टी नेतृत्व र पार्टी संचालन पद्धतीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेकपाका दुई अध्यक्षमा शक्ति केन्द्र्रीत हुँदा मनोमानी निर्णय हुन थालेको र यसले समग्र पार्टी र सरकारलाई नै कमजोर बनाइरहेको उनको बुझाइ छ ।
नेपाल आजसंगको विशेष कुराकानीमा नेता साहले खुलाएका महत्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन् :
क ) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बेमौसमको बाजा बजाइरहेका छन् । ओलीले कहिले मुटु भएको सम्पादक भनेर त कहिले मास्क लगाउने व्यक्ति र कहिले बुद्धिजिवी समुदायलाई अनावश्यक रुपमा कटाक्ष गरिरहेका छन् । यो जरुरी छैन । यस्तै, प्रचण्डले माघीको कार्यक्रममा गएर द्वन्द्वकालमा मारिएका व्यक्तिको जिम्मेवारी र रेशम चौधरीका बारेमा बोल्न जरुरी थिएन । कहाँ के बोल्ने भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्यो ।
ख ) चुनाव हारिसकेको व्यक्ति पुनः सांसद बन्न खोज्नु लाजमर्दो हो । अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । उम्मेदवार बनाउने पनि उस्तै, उम्मेदवार बन्ने पनि उस्तै । यो ठीक भएन ।
ग ) राजपालाई सरकारमा ल्याउन जरुरी छैन । क्षणिक लाभ र लेनदेनका लागि राजनीतिक सम्झौता र निर्णय गर्नु हानिकारक हुन्छ । उपेन्द यादवलाई सरकारमा ल्याएर के फाइदा भयो ? अब राजपालाई ल्याएर के गर्ने ? राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपासंग गठवन्धन गर्नु पनि उचित थिएन ।
घ ) संविधान संशोधन गर्न जरुरी छैन । यो विषयमा नेकपा नेतृत्व आफै स्पष्ट देखिदैन । संशोधन गर्ने हो भने कुन विषयमा कहाँ के के गर्ने हो खुला छलफल गरी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
ङ ) अहिले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको कुरा चलेको छ । यो गलत कुरा हो, यस्तो गर्नु हुँदैन कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्म संविधान संशोधनको कुरा नगरौं । निर्वाचनपछि जे गर्ने हो गरौंला । अहिले सबैले संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
च ) पार्टीमा आलोचना र आत्मालोचनाको विकास गर्नुपर्छ । फरक मत राख्ने वित्तिकै कारवाही गर्ने वा पार्टीबाट निस्किहाल भन्ने सोच बनाउनु गलत हो ।
छ ) सरकारका मन्त्री फेरेकोमा पनि मेरो चित्त बुझेको छैन । सुरुमा मन्त्री बनाउँदा नै उसको योग्यता, क्षमता, दक्षता हेरिएको हुन्छ । बिचमा गएर मन्त्री फेर्नुले राम्रो सन्देश दिंदैन । नयाँ आएका मन्त्रीले खै के गरे त ?
ज ) पार्टीमा २ अध्यक्षमा मात्र शक्ति केन्द्रीत भयो । बल्लतल्ल एक वर्षपछि स्थायी कमिटी बस्यो । केन्द्रीय कमिटी बसेको छैन, पोलिटव्युरो बनेको छैन, विभागहरु बनेका छैनन् । सचिवालयको नाममा दुई अध्यक्ष शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
ञ ) पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भएपनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पार्टी एक भएको छैन भन्ने उदाहरणका लागि ओली र प्रचण्डबीचको भागवण्डाका लागि हुने बार्गेनिङ यथेष्ट छ ।
ट ) अहिले सभामुखको विवाद पनि यही हो । केही संवैधानिक र केही पार्टी अस्पष्टताका कारण सभामुख चयन हुन नसकेको हो । संवैधानिक अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक छलफल जरुरी छ ।
ठ ) उपसभामुख शिवामाया तुम्वाहाङ्फेले भोलि पनि राजनीति गर्ने हो भने पार्टीको आग्रह मान्नु पर्छ । उनको जवाफ अली रुखो भयो ।
ड ) एमसीसीका बारेमा वृहत छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । हतारमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने नभइ यस विषयमा जरैदेखि सम्पूर्ण कुरा बुझेर मात्र सरकार, राजनीतिक दल र जनताले विचार बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।